ကစားစရာ FITNESS စီးရီး PLAYGROUND
Water Park စီမံကိန်းများ
သမုဒ္ဒရာ Rocking မြင်းပြည်သူ့
မင်္ဂလာပါ။ လူတိုင်းယခုဒီမှာနောက်ဆုံးပေါ်ထုတ်ကုန်ဖြစ်သော Ocean Rocking Horse ကိုလူသိရှင်ကြားကြေငြာလိုက်သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အားသာချက်ကတော့လုံခြုံပေမယ့်စိတ်လှုပ်ရှားစရာရှာကြံသူတွေကလူကြိုက်များတယ်၊ ကလေးတွေအချင်းချင်းတစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ခုန်နိုင်ကြတယ်၊ အရည်အသွေးက PE နဲ့လုပ်ထားတယ်။ ကိုယ့်တိုင်းပြည်မှာလူကြိုက်များလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်။ သငျသညျအသေးစိတျကိုသိလိုပါက ...
ကလေးကစားရန်ပစ္စည်းကိရိယာများမည်သို့လည်ပတ်ရမည်ကိုမသိပါသလော။ ဤသည်မှာစီးပွားရေးကို ၀ င်ရောက်လာသူများစွာသောဖောက်သည်များရင်ဆိုင်နေရသောပြaနာဖြစ်သည်။ သူတို့ထင်သလောက်မကောင်းသောဖောက်သည်တုံ့ပြန်ချက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများစွာရှိသည်။ တကယ်တော့ဒီဟာပစ္စည်းပြissueနာမဟုတ်ပါဘူး။ မှန်ကန်သောစီမံခန့်ခွဲမှုကိုရွေးချယ်ပါက ...
Outdoor Children's Play Equipment နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်အကြားအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှု
လက်ဆောင်ကိုကြိုက်သည့်ကလေးများသည်ကစားစရာမဟုတ်ပါ၊ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောဒီဇိုင်းသည်ကလေးအားအဆုံးမဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုပေးနိုင်သည်။ ကလေးကစားခြင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာအချို့ဗေဒင်မဟာမိတ်နှင့်ပျော်စရာကလေးကစားကွင်းသည်ကလေးများအတွက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည်။ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကလေး ၁၀၀၀၀၀ ကျော်ဟာ ...
၁။ ဆိုးသောခံတပ်ပရဒိသု၏သက်တမ်းကိုဆုံးဖြတ်သင့်သည်။ ၎င်းသည် ၀.၆ မှ ၆ နှစ်အရွယ်ကျောင်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ 2. ဆိုးသောခံတပ်ပရဒိသု၏goodရိယာသည်ကောင်းမွန်သည်ဟုယူဆကြသည်။ ၎င်းသည်သေးလွန်းပါကရေရှည်စီးပွားရေးပြproblemsနာများကိုသက်ရောက်နိုင်သည်။ ဒါဟာဂရုတစိုက်အကဲဖြတ်ရမည်ဖြစ်သည် ...
အဆောက်အ ဦး 36, Hongqiao Xinyuan,
Chantchuan ခရိုင်၊ Nantong City